भक्तपुरमा कार टु’x क्रा हुँदा बि’x तेकी महिला अर्कै ड्राईभरकी पत्नी रहिछन्,ईञ्जिनियरले लगेका थिए (भिडियो हेर्नुहोस्) – Dainik Sangalo
भक्तपुरमा कार टु’x क्रा हुँदा बि’x तेकी महिला अर्कै ड्राईभरकी पत्नी रहिछन्,ईञ्जिनियरले लगेका थिए (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 9, 2020 1051
आज दिउँसाे १ः४५ मा सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ नाप सार्वजनिक हुँदै छ । नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न लागेको नयाँ नाप नै अब सगरमाथाको उचाइ हुनेछ । यतिबेला दुई शक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सगरमाथाको नापमाथि गरेको राजनीति पनि स्मरणीय हुन्छ ।
सगरमाथाको उचाइको विषयमा शक्तिराष्ट्रको चासो मात्र होइन, प्रशस्त राजनीति भएका छन् । दुई दशकअघि दुई शक्तिराष्ट्रबीच सगरमाथाको उचाइको आधिकारिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएको जुहारीले राजनीतिक दाउपेच प्रष्ट पार्थ्याे । घटना सन् १९९९ देखि २००५ बीचको हो । सगरमाथाको उचाइ चीन र अमेरिकाले आ-आफ्ना नाप विश्व पर्वतारोहण महासंघमा प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्नो नापलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न महासंघमाथि दबाब बढाएका थिए ।
सन् १९९९ मा अमेरिकाले सगरमाथाको उचाइ बढेर ८ हजार ८ सय ५० मिटर भएको सार्वजनिक गरेको थियो । अनि चीनले सन् २००४ मा ८ हजार ८ सय ४४ मिटर नाप निकालेको थियो ।
आ-आफ्नो नापलाई आधिकारिकता दिन चीन र अमेरिकाले महासंघमा दबाब दिएका थिए तर नेपाल दुवै नापमा मौन थियो । सन् १९९९ को अमेरिका नापमा नेपालबाट नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए तर नाप सार्वजनिक गर्ने बेला श्रेष्ठले पत्तै पाएनन् ।
अमेरिकी नापको टोलीमा श्रेष्ठको संलग्नता भए पनि नेपालको संलग्नता र अनुमति थिएन । चीनले पनि नेपालसँग समन्वय नगरी नाप निकालेको थियो । त्यो नापलाई चीनले आफ्नो भूमिबाट सगरमाथा आरोहण गर्नेलाई त्यही उचाइका प्रमाणपत्र दिन थाल्यो । यो क्रम सन् २००७ देखि २०१५ सम्म चल्याे ।
तर, सगरमाथाको नापमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालबिना नै छलफल भइरहेका थिए । जानकारहरूका अनुसार चीनले त्यतिबेला सगरमाथाको उचाइ नाप्नु र त्यसरी आएको उचाइ कायम गर्न महासंघसम्म पुग्नुको भित्री रहस्यचाहिँ अमेरिकी प्रस्ताव फेल गराउनुसँग जोडिएको थियो ।
सन् १९९१ देखि १९९९ सम्म ८ वर्ष लगाएर अमेरिकाको नेसनल जिओग्राफी अफ सोसाइटीका तर्फबाट डा. वासवर्नले सन् २००१ मा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ५० मिटर सार्वजनिक गरेका थिए। र, त्यो उचाइ कायम गराउन सन् २००५ मा अमेरिकी टोलीले महासंघमा प्रस्ताव पुर्‍याइसकेको थियो ।
सगरमाथाको उचाइ नाप्दा अमेरिकी टोलीले हिउँको मात्रासमेत नापेको थियो । तर, चीनले त्यतिबेला हिउँको मात्रा नापेन । त्यसकारण नाप ४ मिटर कम देखियो ।
विश्व महाशक्तिबीच उचाइमाथिको राजनीति झन्डै पाँच वर्षसम्म चल्यो । दुई महाशक्तिको चेपुवामा पर्‍यो महासंघ । महासंघका मानार्थ सदस्य तथा नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, ‘सगरमाथाको उचाइ शक्तिराष्ट्रको राजनीतिको चेपुवामा परेको छ । चीन र अमेरिकाबीचको यो राजनीतिमा महासंघलाई त्यतिबेला निर्णय गर्न आपत परेको थियो ।’
महासंघले सन् २०१० मा दुवै देशको उचाइ दाबीलाई मान्यता दिएन । बरु मध्यमार्गी भएर ‘जुन देशले जे कायम गर्छन्, त्यसैलाई मान्ने’ निर्णय गरिदियो । अर्थात्, अमेरिका, चीन वा नेपालले जुनजुन उचाइ दाबी गर्छन्, महासंघ त्यसमा नमुछिने बरु ती सबै प्रमाणपत्र स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुग्यो । महासंघले निर्णय दिएको ५ वर्षसम्म चीनले उत्तरी मोहडाबाट आरोहण दलका सदस्यलाई ८ हजार ८ सय ४४ मिटरको प्रमाणपत्र दियो । र, यो बीचमा चीनले नेपाललाई त्यही उचाइ स्वीकार्न कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट दबाब दियो ।
त्यतिबेला उत्तरी मोहडाबाट चढेकाको प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सगरमाथा आरोहीलाई मान्यता पनि दिएनन् । महासंघको निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएपछि दबाबमा परेको चीन आफूले वितरण गर्ने प्रमाणपत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आंशका गर्न थालेपछि सन् २०१६ मा चीन पुरानै नापमा फर्कियो ।
सन् १९५४ मा सर्भे अफ इन्डियाको टोलीले ८ हजार ८ सय ४८ मिटर उचाइ नापेको थियो । त्यही नाप अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ । चीनले त्यो उचाइलाई स्वीकार गरेको छैन । सन् १९७५ मा चाइनिज सर्भे टिमले सगरमाथाको उचाइ १३ सेन्टिमिटर बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसयता चीनले त्यसैलाई मान्दै आएको छ ।
शक्तिराष्ट्रहरू हिमालमाथिको राजनीति कसरी गर्छन ? भन्नलाई विगतमा नेपालका हिमालको आरोहण कथाले पनि पुष्टि गर्छन् । जस्तो, मकालु हिमालमा जापानीहरूको आधिपत्य हुँदा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणमा फ्रान्सको एकाधिपत्य थियो भने सगरमाथा आरोहणमा बेलायतको । हिमाल आरोहणको सफलता उनीहरूको औपनिवेशिक मानसिकतासँग जोडिएको हुन्थ्यो ।
Prevबिहेपछि श्वेता र विजयन्द्रको पुरा परिवारबिच पहिलो भेट, श्रीमानसँग रोमान्टिक बन्दै नाचिन् श्वेता
Nextपाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन हेर्नुहोस् मंसिर २४ गते बुधबार,
व्यक्तिगत रि,स,इबी साँ,ध्न,शिक्षक कार्कीलाई कु’,ट’पि’ट गरी बानियाँले खोलामा ब,गा,ईदिए
अर्की युवतीसँग प्रवेशको च,क्कर चलेपछि त,ना,वमा रहेकी बिना ह,रा,एपछि,प्रेमी प्रवेश कँडेल स,मा,तिए
आ:गोले ज:ले:र आमाछोराको यस्तो भयो रुप, उपचारका लागि सहयोगको गु:हार !